PowerPoint အတွက် Pagination
Pagination စည်းရုံးရေးစာရွက်စာတမ်းများများအတွက် tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တင်ဆက်မှုအတွက် slides မှကြွလာသည့်အခါကခြွင်းချက်ဖြစ်စဉ်ကိုအမည်ကိုဖို့လည်းခက်ခဲသည်။ ဒီတော့စာရငျးလုပျနိုငျရနျအရေးကွီးသောကြောင့်အချို့သောပရိယာယ်၏အဝိဇ္ဇာအလုပ်၏အမြင်အာရုံစတိုင်လုယူစေခြင်းငှါကတည်းကမှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းများအတွက် Microsoft Office ကိုအတွက်တစ်နည်းနည်းယုတ်ညံ့သည်သင်၏တင်ဆက်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုနံပါတ်ဆလိုက်အရအေတှကျများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
PowerPoint အတွက် hyperlink များပြောင်းခြင်းအရောင်
အဆိုပါတင်ပြချက်၏ stylist ဒီဇိုင်းကိုမြင့်မားသည်။ အလွန်မကြာခဏအသုံးပြုသူများ built-in themes များပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲ, ပြီးတော့သူတို့ကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မရှိသမျှသောဒြပ်စင်တစ်ခုယုတ္တိ, ထင်ရသောပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းလမ်းများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုချေးငှားဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသည်။ ဥပမာ, hyperlink များ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲရည်ညွှန်းသည်။
PowerPoint အတွက်ဇယား Create
ကားချပ်မဆိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်နှင့်သိကောင်းစရာများဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကတင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်သိကောင်းစရာများ display ကိုဖန်တီးရန်ဒြပ်စင်၏ဤအမျိုးအစားကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: PowerPoint ပုံဖန်တီးမယ့်ဇယား Create Excel ကိုအတွက်က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံကြမ်းအတွက်ဇယား Create သည် dynamically သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့်မီဒီယာဖိုင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
PowerPoint တင်ပြချက်များ PDF ကိုပြောင်း
ဒါဟာ PowerPoint format နဲ့တစ်ဦးစံတင်ဆက်မှုအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံစဉ်အမြဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖိုင်တွေတခြားအမျိုးအစားများသို့ပြောင်းလဲခြင်းစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဥပမာ, မျှမျှတတလူကြိုက်များ PDF ကိုမှစံ PPT ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတွင်ယနေ့အကြောင်းပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ PDF ဖိုင် format နဲ့ presentation ကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းအများအပြားအချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါတယ် pdf မှလွှဲပြောင်းပါ။
တစ်ဦး PowerPoint တင်ဆက်မှုအတွက်နောက်ခံအစားထိုးခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှု
ဒါဟာရသောစံအဖြူရောင်နောက်ခံကောင်းတစ်ဦးအမှတ်ရစရာတင်ဆက်မှု, စိတ်ကူးဖို့ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီး, ပရိသတ်ကိုပြပွဲကာလအတွင်းအိပ်ပျော်စေသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်နောက်ခံကိုဖန်တီးရန်အားလုံးအတူတူပင် - ဒါမှမဟုတ်သင်ပိုမိုလွယ်ကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းအဖြစ်လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့ဆလိုက်ကနေနောက်ခံကိုပြောင်းလဲအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်နောက်ခံစုစုပေါင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အဘို့အ Options ကို။
PowerPoint မှ PDF ကိုစာရွက်စာတမ်း၏ဘာသာပြန်စာပေ
တခါတရံသူကကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတွက် format နဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာ file ကိုဖတ်ပါသို့မဟုတ်အခြား format ကိုကပြောင်းဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖြစ်စေနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကဒုတိယ option ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားပိုပြီးစကားပြောဖြစ်ပါတယ်ရုံတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ က PowerPoint ကူးပြောင်းခံရဖို့လိုအပျကွောငျး PDF files တွေကိုမှကြွလာအထူးသဖြင့်အခါ။
Hyperlink များနှင့်အလုပ်လုပ် PowerPoint အတွက်
အဆိုပါတင်ပြချက်အစဉ်မပြတ်ပီမိန့်ခွန်းဖတ်ကြားအဖြစ်အချိန်တွင်သာ display ကိုအတွက်အသုံးပြုမပေးပါ။ တကယ်တော့ဤစာရွက်စာတမ်းအလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့ application ကိုသို့လှည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုအ hyperlink များ setting ကိုဒီပန်းတိုင်အတွက်သော့ချက်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကို Hyperlink တစ်ခုကို Hyperlink တစ်ခုကိုအနှစ်သာရထဲမှာဟိုက်ပါလင့်ခ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - ပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းဖိအားပေးတဲ့အခါအချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အထူးအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။
PowerPoint အတွက်ကာတွန်း Create
ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, လူအနည်းငယ်ကသာထိရောက်တင်ပြချက်များကိုဖန်တီးရန် PowerPoint ၏ non-standard feature တွေသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ ကအားလုံးကိုစံ applications များဆန့်ကျင်အထွေထွေလျှောက်လွှာလျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်မည်မျှစိတ်ကူးနိုင်ပြီးကြောင့်ပင်လျော့နည်းသည်။ ဒီဥပမာတစျခု PowerPoint အတွက်ကာတွန်း၏ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်သည်။
PowerPoint တင်ဆက်မှုအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့အရေးပါဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါကိုပိုမိုအရေးကြီးသောထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရုတ်တရက်မစတင်မည်သည့်အခါအသုံးပြုသူအပေါ်သည်ပြိုလဲကြောင့်စိတ်ခံစားမှု၏မုန်တိုင်းဖော်ပြရန်ဒီတော့ခက်။ ဤသင်တန်း၏, အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအခြေအနေကိုအတွက်ကြမ္မာစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်အပြစ်မတင်ကြဘူး။
အမှု၏တင်ပြချက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါ banal အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်လာကြောင်းဒါကြောင့်မကြာခဏလှည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်တပြင်လုံးကိုဆလိုက်၏ရလဒ်များကိုဖျက်ပစ်ရန်ရှိသည်။ သို့သော်စာမကျြနှာတင်ဆက်မှုကိုဖျက်နေချိန်တွင် irreparable မရှိစေခြင်းငှါ, စဉ်းစားရန်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုဖယ်ရှားများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆလိုက်ဖယ်ရှားခြင်း၏အဓိကနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားရန်, ပြီးတော့ကလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့် software ကို install လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြည့်စုံကို automation နှင့် simplifying အသုံးပြုပုံရိုးရှင်းသောအလုံအလောက်အလုပ်အကိုင်လှပါတယ်။ သို့သော်ဤသည် Microsoft Office ကိုတပ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများမှကြွလာအတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ ဤတွင်အရာရာနူးညံ့နှင့်တိကျစွာအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ က MS PowerPoint ကို standalone application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လမ်းမရှိကြောင်းထိုခဏခြင်းတွင်တန်ဖိုးရှိဖော်ပြထားခြင်းကို Install ပြင်ဆင်နေသည်။
ဆလိုက်နှင့်အလုပ်လုပ် PowerPoint အတွက်
အားလုံးကတော့အမှုများ, ပန်းချီ၏တင်ဆက်မှုအတွက် - ဆလိုက် - အသုံးပြုသူက၎င်း၏အခြေခံပုံစံ၌ဝစွာစား။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရာပေါင်းများစွာရှိပေမည်။ ထိုအခါအရည်အသွေးကိုသရုပ်ပြအတွက်နာမ၌အထွေထွေလိုအပ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို fit မသင့်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူတက်ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ဆလိုက်တည်းဖြတ်နေဖြင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ PowerPoint တင်ပြချက်များအတွက်တည်းဖြတ်သှေးစံအများအပြားရှုထောင့်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟု tools များ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
PowerPoint အတွက် crossword ပဟေဠိ Create
PowerPoint အတွက်အပြန်အလှန်အရာဝတ္ထု Creating သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ကောင်းတစ်ဦးနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစျခုကလူတိုင်းပုံနှိပ်မီဒီယာများကသိတယ်သည့်သာမန် crossword ပဟေဠိဖြစ်နိုင်သည်။ PowerPoint အလားတူတစ်ခုခုဖန်တီးရန်ချွေးဖို့ရှိသည်ပေမယ့်ရလဒ်ကထိုက်သည်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ PowerPoint တင်ဆက်ဖို့ဂီတထည့်သွင်းခြင်း
အသံမဆိုတင်ဆက်မှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်တစ်ဦးချင်းစီပို့ချချက်အပေါ်နာရီကအကြောင်းပြောဆိုပါ။ တူညီသောဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ဦး PowerPoint တင်ဆက်မှုအတွက်အသံဖိုင်နှင့်ဤအများဆုံးထိရောက်မှုထံမှရရန်လမ်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် configure လုပ်ပြီးအမျိုးမျိုးနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
PowerPoint ၏ analog
အားလုံးကတော့အမှုများအတွက်တင်ဆက်မှု - သာ PowerPoint ၏အကူအညီဖြင့်ဖန်တီးခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်း။ ဒီကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သပြဿနာများ, အခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်နှင့်သရုပ်ပြ၏ပြင်ဆင်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ခြွင်းချက်မဟုတ်ကြောင်းယူဆရန်ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတင်ဆက်မှု၏ဖန်တီးမှုအဆင်ပြေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါပေမယ့်တချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာမသာဆင်တူပင်ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်စာရင်းထဲမှာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း PowerPoint တင်ဆက်အရာအားလုံးကိုအတူလုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ချောချောမွေ့မွေ့သွားဘူး။ မမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, က rasterizer ရုပ်ပုံအလွန်တားဆီးဖြစ်သောအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရဖို့မကြာခဏဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, အရေးကြီးသောအရာဝတ္ထုမိုက်စေသော။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်ထိုအားနည်းချက်အပေါ်အလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှများကို Office suite ကြီးမြတ်လူကြိုက်များအတော်ပင်။ ထိုကဲ့သို့သော Word, Excel နဲ့ PowerPoint အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောကျောင်းသားများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သိပ္ပံပညာရှင်များအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများ။ အဆိုပါမျက်နှာသစ်အားလုံးအစုံဖော်ပြခြင်းမပင်တစ်ဝက် features တွေသုံးစွဲဖို့အတော်လေးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏သင်တန်း, ထုတ်ကုန်အဓိကအားပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
PowerPoint အတွက်စီးဆင်းမှု image ကိုစာသားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု
Runaround စာသားကိုရုပ်ပုံများကို - ကအမြင်အာရုံဒီဇိုင်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာနည်းလမ်းပါပဲ။ ဒီတော့သူက PowerPoint တင်ဆက်မှုအတွက်ကောင်းသောကြည့်ချင်ပါတယ်။ သို့သော်အရာအားလုံးဒါရိုးရှင်းသောမ - ကစာသားထဲမှာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းရန်, Tinker ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဦး "အကြောင်းအရာဧရိယာ" ဖြစ်လာစာသားများအတွက် PowerPoint ပြတင်းပေါက်တစ်အချို့ဗားရှင်းနဲ့စာသားကိုသို့ဓာတ်ပုံများထည့်သွင်းများ၏ပြဿနာ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ PowerPoint များအတွက်ဖော Installing
အမြားအပွားကျော်ကြားအစီအစဉ်ကို Microsoft က PowerPoint, သင်တင်ပြချက်များနှင့်အခြားအလားတူစီမံကိန်းများအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဖောင့်အမျိုးမျိုးကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအမှုတော်တို့ကိုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ထပ်ဆောင်းဖောင့်ကို install လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့် installed စံအထုပ်, အစဉ်မပြတ်, ခြုံငုံဒီဇိုင်း fit မထားဘူး။
PowerPoint အတွက်တင်ဆက်မှုဖန်တီးသောအခါဒါဟာခမ်းနားစကေးကိုဖွင့်ဖို့အစဉ်အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများ, ဒါမှမဟုတ်တခြားအခြေအနေများတင်းကျပ်စွာစာရွက်စာတမ်း၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမင်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါက - ဘာလုပ်ရမှန်း? ကျနော်တို့တင်ပြချက်ချုံ့ဖို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိသည်။ "အဝလွန်ခြင်း" တင်ဆက်မှုသူ့ဟာသူ, လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် text document ကို Microsoft Office အတွက်အခြားစီမံကိန်းတွေနဲ့သလောက်အလေးချိန်ပေးသည်။
https://termotools.com my.termotools.com © PowerPoint 2019